စာပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 466
ပေါက္ခရ၀ဿ မိုးစက်များ ကျော်ဟုန်း ဇန်န၀ါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၄ ဒီကောင်းကင်ထက်မှာ လေရိုင်းတွေ တိုက်နေတယ်။ ပျံနေတဲ့ ငှက်တွေထဲ လေဆန်ငှက်က ရှား လေဟုန်ခိုစီးငှက်က များ။ အဇလ္လာတခွင်လုံး မှိုင်းညို့ ပြိုဆင်းလာတဲ့ မိုးစက်များဟာ မိုးခါးရေ …။ မိုးခါးရေဆိုပြီး သောက်သူမဲ့မယ် မထင်လေနဲ့ ၊ အခါးဟာ ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး သောက်သူက မရှား၊ (ဟိုက်… အံ့သြနေပါသလား) ။ ဒို့ ဒေသဆီမှာတော့ ..… လူ့ အခွင့်အရေးအော်ပြီး သူ့ အခွင့်အရေးချည်း ဖြစ်နေ လက်လက်ထနေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတဲ့ ဖိုရပ်တွေလုပ်၊ စည်းဝေးပွဲတွေလုပ် တောင်းဆိုတင်ပြနေတဲ့ အများစု...
ကွန်ကရစ်တောထဲက သားကောင်၊ လှောင်ချိုင့်ထဲက ချိုးငှက် – အပိုင်း (၁၀)
အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ရောက်ပြီး အရေးပေါ်အဖြစ်ချင်ဆုံး အရာတွေထဲတွင် ပြင်ပက ကိုယ်ယ်နှင့်သက်ဆိုင်သူများနှင့် အဆက်အသွယ် ရလိုချင်းကလည်း ထိပ်ဆုံးကရှိနေသည်။ ထောင်ကပေးသော ထမင်းဟင်းနှင့် ဘယ်လိုမှမစားနှိုင်။ တချိန်တုန်းက ကိုယ့်ရှေ့တွင် ထောင်ကျတွေမရှိပဲ ထောင်ထဲ ရောက်လာသူတွေ၏ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောဆိုနေသံထဲတွင် ဆေးလိပ်သောက်ချင်လွန်းလို့ အပြင်က ဝတ်လာသော ဂျင်းအကျီင်္ နှင့် ဆေးလိပ်(၁၀)လောက်ကို လဲသောက်ကြသည်ဟုပြောသံကြားနေရသည်။ အခု ကိုယ့်ရှေ့မှ ထောင်ကျ ရဲဘော်တွေရှိနေသည်။ သူတို့၏ အကူအညီက နေလို့ဖြစ်နေသည်။ ဦးစွာ ရောက်နှင့်နေသူတွေ၏ ရဲဘော်ရဲဘက် စိတ်ဓာတ်က နောက်လူတွေကို သူတို့တုန်းကလို အခက်အခဲ မရောက်အောင် ဖန်တီးပေးနေသည်။ ဘဝမှာ အဆင်ပြေနေတုန်း ပေးလာသော အကူအညီထက် အခက်အခဲကြုံစဉ် ကူညီပေးသူကို ပိုအမှတ်ရမိတာကတော့ အမှန်ပင်။...
မဉ္ဖူသကပန်း – သို့မဟုတ် – ဇော်မျိုးထွဋ် (မဇ္ဈိမလှိုင်း)
ကျော်ဟုန်း ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ဖူးတုန်းကလဲ မွှေး ပွင့်တုန်းကလဲ မွှေး ကြွေစဉ်မှာလဲ မွှေး၊ ပန်းရဲ့လမ်းတလျှောက် လမ်းရဲ့ ပန်းတပွင့်ဟာ သူ့ အဆင်း သူ့ အသင်း သူ့ သတင်း များ … များစွာ ဂုဏ်ခြင်းထပ်၊ အများအတွက် ရနံ့ သစ်ခဲ့လေပေါ့ အဖိုးထိုက်တန်စွ မဉ္ဖူသက (သို့တည်းမဟုတ်) ဇော်မျိုးထွဋ် (မဇ္ဈိမလှိုင်း)၊ ၂၀၁၄ ရဲ့ ဂျန်န၀ါရီ ၅ -ရက် ညနေ နှလုံးသားလှသူမို့နှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ရလေသလား ခင်ဗျား စိုက်ခဲ့တဲ့ပန်း အမြဲမွှေးတယ် သုဂတိလမ်းမှာ အနိုင်ပိုင်း၍ ပြုံးစေသောဝ်။ ...
ဆောင်းယွန်းလ ဇန်န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၄ ယမ်းစယမ်းနနဲ့ ယမ်းသီးတွေဟာ လမ်းမီးတွေလို ကမ္ဘာကို ကမ္ဘာအတွက် ကမ္ဘာထဲ အရဲစွန့်ပြီး ပြူးပြဲရှာခဲ့ကြ….. အမှောင်တွေအကြောင်း အရောင်တွေအကြောင်း အကြောင်းကြောင်းတွေအကြောင်း အကျိုးနဲ့ အကြောင်း အကြောင်းတွေပေါ် အက်ကြောင်းထပ်တဲ့ အကြောင်း ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ရင် မသမာမှုက ဓားပြထပ်တိုက်တယ်…. မိုးကောင်းကောင်း မလင်းခဲ့ရ မိုးစုန်းစုန်း မချုပ်ခဲ့ကြ နေထိန်ထိန်မသာခဲ့ လ၀င်းဝင်းမလင်းခဲ့ ထိန်ထိန်လင်းလင်း မ၀င်းခဲ့ရ…. ဆရာတပါးရဲ့ ကဗျာစကားအရ စိန်စိန်ရေ အချိန်တွေသိပ်မရှိကြတော့ဘူး ဘုရားပဲဖူးရမလား လိပ်ဥပဲတူးရမှာလား စကားပဲပြောရမလား တရားပဲဟောကြမှာလား…. ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲက ဧ၀မျက်နှာပေါ် တမေ့တမော အိပ်မောကျနေတဲ့ သန်းခေါင်ယံတချို့ကို ဆေးပေါ့လိပ်တတိုမီးညှိဖို့ လက်တို့ပြီး နိုးအောင်နှိုးတဲ့အခါ နိုး(No)လို့...
အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ တန်းပိတ် သံချောင်းသည် နေ့တစ်နေ့၏ အနားသတ်မျဉ်းကို ဆွဲလိုက်သည်။ ညနိဒါန်း မဖွင့်သေးသော်လည်း နေ့နိဂုံးကတော့ ပြီးဆုံးသွားပြီ။ ထောင်တစ်ခုလုံး သော့ခလောက်များ၏ ထိမ်းချုပ်မှုအောက်သို့ ကျရောက်လျှက်၊ လှောင်ချိုင့်ထဲရှိ လူသားများက ကမ္ဘာသစ် တစ်ခု ဖန်တီးမှုအတွက် ပြင်နေကြသည်။ သူတို့ဖန်တီးသော ကမ္ဘာသည် ကျဆုံးနှိုင်သော စ်ိတ်ဓာတ်ကို မောင်းတင်းရန် ဝီရရသ စိုက်ထည့် ထားသလို အသစ် ရောက်ရှိလာသူတို့အတွက် နွေးထွေးမှုကိုပါ စိုက်ပျိုးထားကြသည်။ အိမ်လွမ်းစိတ်ဖြင့် အမြင့်ပျံနေသော ဝိညာဉ်ငှက်တို့ကို သံတိုင်ထဲရှိ မူလနေရာသို့ ပြန်လည်ခေါ် ထားကြသည်။ စိတ်နှင့်ကိုယ် တထပ်တည်း ရှိအောင် ဘိုးဘိုးကြီး၏ နှိုးဆော်သံက ရုတ်တရက် ထွက်လာခဲ့သည်။ “စားထားကြဟေ့ ခနနေ စမယ်”...
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သင်္ချာ) ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာမတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်အား အကူအညီ လာတောင်းသည်။ ဆရာမက … ဆရာ၊ ကျွန်မသားလေးက စာပေးစာယူ (ယခု အဝေးသင်တက္ကသိုလ်) သင်တန်းမှာ သင်္ချာအဓိက နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်နေပြီ၊ အခုအခါ စာမေးပွဲက နှစ်လလောက်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုတော့ ဆရာ့ဆီကို ခေါ်ခဲ့ချင်တယ်။ သူလိုတာလေး နည်းနည်းပါးပါး လမ်းညွှန်ပေးနိုင်မလားလို့။ ကျွန်တော် သူ့သားအား နောက်နေ့ခေါ်လာရန် ပြောလိုက်သည့်အလျောက် နောက်နေ့တွင် သူ့သားနှင့် တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်က စမေးလိုက်သည် … မင်းမလိုက်နိုင်တာ ဘယ်ဘာသာမှာလဲ Paper 1 လား2လား၊3လား… အမှန်ပြောရရင်တော့ ဘယ်ဟာမှ မလိုက်နိုင်ဘူးဆရာ။ တတ်လဲ...
ဆောင်းယွန်းလ ဇန်န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၄ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းက တမိုးတည်းအောက်မှာ ပေါင်းသင်းနေထိုင်တယ်…. လူ့အကြိူက်ကို ဘုရားသခင်တောင် မီအောင်မလိုက်နိုင်ဘူး….. တမိုးလုံးအောက် အလေ့ကျပေါက်တဲ့ သဘာဝတရားက ပါးတဲ့အခါ ပါးသလို ထူတဲ့အခါလည်း ထူမယ် အေးတဲ့အခါ အေးသလို နွေးတဲ့အခါလည်း နွေးမယ် ခါးတဲ့အခါ ခါးသလို ချိုတဲ့အခါလည်း ချိုမှာပေါ့…. အပူအအေးမျှဖို့ အခန်းထဲက လေပူလေအေးစက်တွေရဲ့ ဇယားကွက်တွေကို လိုတိုးပိုလျှော့တွက်နှိပ်ပြီး ဘ၀ဆိုတဲ့ အရေပြားကို အသပြာတွေခြုံအိပ်ရုံနဲ့ အရာအားလုံး မျှတလုံခြုံ စိတ်ချရပြီတဲ့လား…. ကမ္ဘာကို မီးရှို့ဖို့ မီးတို့ထားခဲ့တဲ့လောင်စာတွေက ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရဲ့ လက်ထဲမှာ အစွယ်တဖွေးဖွေးနဲ့….။ No tags for this post.
နိုင်ဦးညို (ဖုိုးဇီးရုိုး) ဇန်န၀ါရီ ၉၊ ၂၀၁၄ အမယ် ခုမှ သိန်းဂဏန်းခေတ်မှာ ခေတ်ကောင်းလာသူ တချို့က သိန်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိ နေပါရော့လား၊ သူတို့တတွေ သန်းဂဏန်းခေတ်က ခေတ်ဆိုးတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဘယ်လိုများမေ့သွားလေသလဲ မမေးရဲပါဗျာ၊ အဲဒါကို ဒေါ်လာနှစ်သောင်းခွဲနဲ့ ဆိုလား လဲစားသူ လဲစားသွားသတဲ့၊ တန်းစီတိုးစား အမွေခံ ရလဒ်ပေါ့၊ ဒါကိုလား ကျောခိုင်းသူများ နောက်ကြောင်းပြန် လျှောက် ကြောက်သလား၊ ။။။ No tags for this post.
ကွန်ကရစ်တောထဲက သားကောင်၊ လှောင်ချိုင့်ထဲက ချိုးငှက် – အပိုင်း (၈)
အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၃ အပြင်ဘက်ထွက်နေသူများကိုငေးမောရင်း ကြည့်နေမိသည်။ သူတို့အခန်းတံခါးများကို ပြန်ပိတ်သံကြားနေရသည်။ တဖြေးဖြေး လူတွေ အပြင်ဘက်တွင် မရှိသလောက် ဖြစ်သွားသည်။ “အပြင်ထွက်မယ် ဆီး မိလ္လာချမယ် ရေချိုးမယ် ၁၅မိနစ်ပဲ အချိန်ရမယ် ပြီးရင်ပြန်ဝင်ရမယ် ” တည ခင်းလုံး အခန်းကျဉ်းထဲ ၊တမနက်ခင်းလုံး အခန်းကျဉ်းထဲ ခုတော့ အပြင်ကို ထွက်ရတော့မည်။ ခုန ကအပြင်တွင် လမ်းလျှောက်နေသူ အားလုံး အခန်းထဲ ရောက်နေကြပြီ။ အခန်အပြင်ဘက်မှာ မိမိတို့ လေးယောက်သာရှိသည်။ အခန်းအပြင်ဘက်ရောက်သည်နှင့် ၁၂ခန်းကလှမ်းခေါ်သည်။ သူတို့အခန်းရှေ့ရောက်တော့ ရေချိုးဖို့ ရေခွက်နဲ့ ဆပ်ပြာခွက်ကိုပေးပြီး ခပ်ခပ်မြန်မြန်လုပ်ဖို့ ပြောသည်။ ကမန်းကတန်းတက်သုတ်ရိုက်ပြီး ရေချိုးဖို့ ပြင်ရသည်။ ဆီး နှင့်...
မောင်စုိုးချိန် ဇန်န၀ါရီ ၈၊ ၂၀၁၄ နွေနေရောင်ထဲ မီးကျည်းခဲတွေပါလာ ဦးခေါင်း ကျောပြင် အရေပြားတွေနဲ့သူတို့ မှာအံတုရဲခဲ့ကြ။ ဒီလိုပါပဲ ဆောင်းလ သိတ်အေးမြဲ ရေခဲအမှတ်အနုတ်လက္ခဏာ လူဟာသွေးခဲ သွေးတောင့် လမ်းတောင့်မှာ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ဖြစ်နေ မတ်တပ်ရပ်လျှက်သား..။ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အနွေးထည်အုပ်ထား မျက်နာတခုထဲဖေါ်ထား ဖြူဖွေးနှင်းဖတ် ခေါင်းဆောင်းထားလို့ ။ ဒီနေ့၂၀၁၃ ဒီဇင်္ဘာ ၁၀ မနေ့ က ဒီဇင်္ဘာ ၉ တနေ့ က ဒီဇင်္ဘာ ၈ ရက်စွဲတွေပြောင်းသွား အဖြူကောင် အဖြူမ အသက်ကြီးသူ အသက်ငယ်သူ သိက္ခာမျက်လွှာ ချထားသူ ရင်ဘတ်မှာ စာဆွဲထားသူတွေ...
Page 466 of 563«1...464465466467468...563»